Jadwalka diiwaan gelinta tartamayaasha doorashada Baarlamaanka Aqalka Sare ayaa la… – Hagaag.com
Jadwalka diiwaan gelinta tartamayaasha doorashada Baarlamaanka Aqalka Sare ayaa la…
Posted on 23 Diseembar 2020 by Admin in National // 0 Comments
Guddiga doorashooyinka dadban ee heer federal ayaa shaaciyay in jadwalka diiwaan gelinta tartamayaasha doorashada Baarlamaanka Aqalka Sare uu bilaabanayo taariikhdu markay tahay 26-ka bishan December.
Guddigu waxay sheegeen in doorashada xildhibaanada Aqalka Sare lagu dhameystiri doono inta u dhaxeysa 31 december illaa 6-da January.
Tallaabada xigta waxay tilmaameen in ay noqon doonto diiwaan galinta, xaqiijinta iyo tababarida odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ee soo xulista ergada doorashada Baarlamaanka Aqalka Hoose.
Jadwalka doorashada Aqalka Sare ayaa dib u dhac uu ku yimid, iyadoo horey loogu heshiiyay in ay billaabato 1da bisha December, hase yeeshee khilaafka siyaasadeed ee doorashada ayaa suurtagalin waayay.
Shabakada Wararka,hagaag.com info@hagaag.com